NGABA UNGATYA UKUTYA UKUTSHA KWEORENJI EMVA KOKUVALWA? CHAZA OGQIRHA - I-COVID-19
Ngaba Ukutya i-Orenji etshisiweyo kunokuBuyisa iiNzwa eziLahlekileyo zoNambitha kunye nokuNuka emva kweCIVV-19?
Uphando lubonisa ukuba izivamvo ezilahlekileyo zevumba kunye nencasa inokuba sisiphumo esingalindelekanga kwizigulana ze-COVID-19.
I-social media hack hack icebisa ukuba ukutya iorenji etshisiweyo exutywe neswekile emdaka kunokunceda abantu bahlaziye iingqondo zabo.
Oogqirha abaqinisekanga ukuba eli qhinga liyasebenza, kodwa bathi abantu bangazama uqeqesho lwevumba ukuba bayasokola nelahleko levumba kunye nencasa.
Ukuphulukana nevumba kunye nokunambitheka (kwezonyango okwaziwa ngokuba yi-anosmia kunye ne-dysgeusia, ngokwahlukeneyo) yayingezizo ezo zeempawu zokuqala ze-COVID-19 ekubhekiswe kuzo Amaziko oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo (CDC) entwasahlobo ephelileyo, kodwa ekugqibeleni yongezwa kwifayile ye- uluhlu olusemthethweni lwearhente emva kwe ukukhula umzimba wophando bafumanise ukuba abantu abaninzi abafumana i-coronavirus banamava angaqhelekanga.
Ngoku, ngoJanuwari 2021 ukufunda epapashwe kwi Ijenali yamayeza angaphakathi ifumanise ukuba phantse i-86% yezigidigidi ze-2,581 ze-COVID-19 eziye zafunda zinamava okuphulukana nokungcamla kunye nevumba elivela kwinoveli coronavirus. Abaphandi baphinde bafumanisa ukuba i-15% ayikayifumani ingcamango yabo yokunambitha kunye nevumba kwiintsuku ezingama-60 emva kosulelo, ngelixa phantse i-5% yayikwimeko efanayo kwiinyanga ezintandathu kamva.
Intsingiselo yenani leengelosi ezili-1010
Faka i-hack ye-orange etshisiweyo. Imithombo yeendaba kwezentlalo igcwele ubungqina kubantu abafunga ukutya iorenji etshisiweyo edityaniswe neswekile emdaka yabanceda baphinde babenakho ukungcamla kunye nevumba emva kokuba be-COVID-19. Kwividiyo enye, Umsebenzisi we-TikTok ubize oku njengeyeza laseJamaican Phambi kokuba atye lo mxube emva koko athi, ndilinde iiveki ezimbini koku.
Omnye umsebenzisi weTikTok Uthe wakwazi ukungcamla i-Dijon lwemostade emva kokutya iorenji etshisiweyo. Uye wachaza, nangona kunjalo, ukuba inokuba yinto eyenzekileyo.
Okwangoku, omnye umsebenzisi weTikTok yathi ayisebenzi kuye, kwaye nangaphambi koko Bachelorette Inkwenkwezi uKaitlyn Bristowe ukhankanye ukuyizama kumabali akhe e-Instagram. Akazange abe neziphumo ezilungileyo, nazo.
Ke, sithini isivumelwano? Ngaba olu hlobo lomceli mngeni wokutya lunokunceda ukubuyisa imvakalelo elahlekileyo yevumba kunye nencasa? Sibuze oogqirha ngezimvo zabo.
Okokuqala, kutheni abanye abantu belahlekelwa ziimvakalelo zokungcamla kunye nevumba emva kwe-COVID-19?
Esi sisiphumo secala esiqhelekileyo seentsholongwane eziphindaphindayo empumlweni nasemqaleni, utsho URichard Watkins, MD , ugqirha wezifo ezosulelayo kunye nonjingalwazi kwezamayeza kwiYunivesithi yaseNyakatho-mpuma yeOhio Medical. Iintsholongwane zinokubangela ukudumba kunye nokudumba kwiindlela zakho zempumlo kwaye oko kunokubangela ukuxinana, ukuphazamisa izivamvo zakho kwinkqubo.
Kodwa kutheni olu phawu luhlala kwabanye abantu alucaci gca. Izamkeli zentsholongwane ziye zafunyanwa kuludwe olukhethekileyo lwempumlo eliqukethe i-olfactory-ivumba-imithambo-luvo engowokuqala ukufumana ivumba lasemoyeni, uyachaza umphandi we-anosmia UEric Holbrook, MD , Umlawuli we-rhinology e-Massachusetts Eye kunye ne-Ear kunye nonjingalwazi onxulumene no-Otolaryngology – Head and Neck Surgery e-Harvard Medical School. Nangona ezi receptors zingakhange zifumaneke kwimithambo-luvo ngokwazo, umonakalo ojikeleze usulelo kunokwenzeka ukuba ubangele ilahleko.
Imvakalelo yokujoja inxibelelene kakhulu nokukwazi kwakho ukungcamla, uyongeza, kungoko ukulahleka kwevumba kwaye incasa. (Kubalulekile ukuba uqaphele: I-COVID-19 ayenzi ukuba ulahlekelwe ngumzimba ngokungangqalanga!)
Iindaba ezimnandi: I-epithelium, emgceni womngxuma wakho wempumlo, ineeseli ezinokwahlula ziphinde zivuselele loo mithambo yonakeleyo, utshilo uGqirha Holbrook. Kodwa kufuneka babuyele kwingqondo kwaye benze unxibelelwano olufanelekileyo. Oko kungathatha ixesha, utshilo.
kuyakufuneka sinxibe nini iimaski
Yintoni le yokutshiswa kweorenji etshisiweyo, kwaye ngaba inganceda ekubuyiseleni incasa yakho okanye ivumba?
I-recipe ilula kakhulu. Uthatha iorenji ngaphezulu kwelangatye elivulekileyo (uninzi lwabantu luyenza kwitafiletop yabo yegesi) emva koko uchuba okanye usike ulusu. Usiphula iziqhamo, uzixube neswekile emdaka, kwaye utye umxube. Abantu abafunga ukuba iyasebenza kubonakala ngathi bayakwazi ukungcamla lo mxube ngoko nangoko, ngelixa abanye besithi awenzi nto-okanye mhlawumbi unceda ukukhuthaza incasa yawo ukuba isabele kwiiyure ezimbalwa.
Kodwa oogqirha abaqinisekanga ngokupheleleyo. Ukuza kuthi ga ngoku, ubungqina ngokucacileyo buyinto engaqhelekanga, utshilo uGqirha Watkins. Ubuqili abuzange bufundwe kwaye iziphumo ezilungileyo aziphindaphindwanga ngabaphandi, ke ngokwembono yesayensi, ndiyathandabuza ukuba iyasebenza, uyongeza.
Kunzima nokuba ithiyori ngoba olu qhekeko luya kusebenza, utsho UIahn Gonsenhauser, MD , umgangatho osemagqabini kunye negosa elinamava kwizigulana kwiYunivesithi yaseOhio State Wexner Medical Centre. Akukho nto siyaziyo enokuthi ichaze ukuba kutheni le nto inokuba sisisombululo esiphumelelayo, esisebenzayo, utshilo, ngenxa yokuba ukuphulukana noluvo lwakho lokungcamla kunxulunyaniswa nokulahla ivumba lakho le-COVID-19. Ngenxa yoko, ukutya iincasa ezinamandla zodwa akunakulindeleka ukuba uqalise ukungcamla kwakho ukuba ivumba lakho alikabikho okwangoku.
UGqirha Holbrook uyavuma. Ngelixa ukutya lo mxube wokutya kungeyongozi (ukuba nje unonophele malunga namalangatye avulekileyo), abukho ubungqina bokuba iyasebenza kwaye sesinye isifundo ngobuninzi bamabango obuxoki agcwele kwimithombo yeendaba zentlalo ngokubhekisele 'kunyango' Zonke iintlobo ezahlukeneyo zokuphazamiseka kwezempilo, kubandakanya ne-COVID-19.
Kukwakho oku okuthathelwa ingqalelo, ngokwe UStanley H. Weiss, MD , Unjingalwazi wezamayeza eRutgers New Jersey Medical School kunye neRutgers School of Public Health: Abantu abakholelwa ukuba inkohliso ebasebenzeleyo inokuba sele beyifumene ingqondo yabo yokujoja.
Kulungile, ke yintoni enye onokuyenza ukunceda ukuvuselela izivamvo zakho zokungcamla kunye nevumba emva kwe-COVID-19?
Ayisiyo mpendulo ithandwayo, kodwa ngokubanzi, kufuneka ulinde iimvakalelo ukuba zibuye. Kubekho iimvavanyo ezenziweyo ngethamo ephezulu yonyango lwe-steroid, ukuzama ukunciphisa ukudumba nokudumba kwiipaseji zempumlo ngethemba lokubuyisa imvakalelo yomntu yokujoja, kodwa akukho nto inentsingiselo esele ivele kuyo, utshilo uGqirha Gonsenhauser.
Nangona kunjalo, uGqirha Holbrook uthi ungazama into ebizwa ngokuba luqeqesho lwevumba, olubandakanya ukufumana ivumba elomeleleyo kunye nokulenzela ngelixa ugxile kwinto ekufanele ukuba injani. Abanye uphando ibonakalisile ukuba abantu banokuphucuka kwisakhono sokujoja xa kuthelekiswa neqela lolawulo emva koqeqesho lwevumba. Asinguye wonke umntu ophendula ngokufanayo, utshilo uGqr. Holbrook, kodwa le yinto ayisiyomfuneko kwaye kulula ukuyenza kwaye kuyacetyiswa.
Nantsi indlela yokuyizama: Hlanganisa amavumba aqinileyo ekhayeni lakho (cinga: isinamoni, iminti, kunye nesitrasi) kwaye uphefumle imizuzwana eli-10 ukuya kwengama-20 ngelixa ucinga ukuba livumba liza kuba njani. Iioyile eziyimfuneko nazo ziluncedo. UGqirha Holbrook ucebisa ukuba usebenzise ivumba elinamandla, njenge rose, i-eucalyptus, ilamuni kunye ne-clove. Qhubeka nokwenza oku yonke imihla.
I-111 ethetha ingelosi
Ukuba unengxaki yokuphulukana nephunga kunye nokunambitheka, kuya kufuneka ujonge nogqirha wakho wokuqala. Kukho uphando oluninzi olwenziwa kwintsimi kangangokuba into entsha inokuza, uDkt Weiss uthi. Ugqirha wakho unokukwazi ukukuhambisa kunyango olutsha okanye, ubuncinci, akuthumele kwingcali enokukuvavanya ngakumbi.
Kwaye, ukuba ufuna ukutya iorenji- qhubeka. Iziqhamo zityebile ku-vitamin C kunye nezinye izondlo ezilungele wena. Musa ukufumana ithemba lakho ngokukhawuleza.
Eyona ilungileyo phantsi kwokhilimu wamehlo kwizangqa ezimnyama
Umyeni akafuni ukulala ngesondo
i-aventurine eluhlaza emnyama
Ngaba i-apple cider viniga inokunceda ukunciphisa umzimba
1010 intsingiselo yokomoya